हार्दिक श्रद्धाञ्जली गिरिजा बाबु !
मेरो पनि हार्दिक श्रदान्जली गिरीजा प्रसाद कोइरालालाइ।
राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु भन्ने उनका अन्तिम शब्द निकै मर्मषपर्दी लाग्यो। सबै नेताको दिमागमा यो कुरा घुसे हुन्थ्यो की?
गिरिजा प्रसाद कोइरालाप्रति म पनि यहि बाटै हार्दिक श्रध्दान्जली दिन चाहन्छु ।
नेपालियनजीले भन्नुभए जस्तै उनका अन्तिम वाक्यमा सबै नेताहरुको बिचार प्रवाह होस ।
मृत्यु शाश्वत छ । मृत्युभन्दा पर त कोहि छैन तर बिचलित पार्नु यसको नियति हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला तिमिलाइ हाम्रो श्रद्वासुमन छ । तिमिलाइ देशले सम्झिरहनेछ ।